Khariidad waddo cusub oo hal-abuurnimo ah
Safar wadashaqeyn-wadaag ah ayaa u baahan maareyn wax soo saar, iibin, suuqgeyn sumadeed, naqshadeyn, horumarin, waaxda qorshaynta ah oo aan kala go 'laheyn ayaa wada shaqeynaya si loo bixiyo mashaariic cusub.
sheekooyinka fikradaha, qorshayaasha safka xilliyeedka la soo bandhigayo, qeex mashruucyada horumarsan & hufnaanta hareeraha 'guusha', iswaafajinta qoondeynta kharashka suuqa, luqadda naqshadeynta, talobixinta farsamada & falanqaynta tartanka, isu waafaji iibiyaasha & awoodda.
Ujeedada: xaqiiji oo wadaag wadaag kooban, saxiix rasmi ah, bilow qorshaynta suuqa, bilowga rasmiga ah ee wajiga naqshadeynta, soosaarida jaartarka mashruuca ee suurtagalnimada mashruuca marka loo eego xuduudaha qiimaha, waqtiga & ilaha
Qorshaynta: Saadaasha bilowga iyo qoondaynta soosaarka
Isku hagaaji 2D iyo jihada naqshadeynta degdegga ah, dib u eeg shaybaarka 1aad qalabka aaladda, xaqiiji jihada naqshadeynta 2D.
Go'aan baayacmushtarka oo dhammaystiran oo la xiriira ujeeddooyinka ganacsiga, istaraatiijiyada kanaalka, midabyada midabbada leh iyo istaraatijiyadaha qiimaha.
FMEA, DFM, Falanqaynta socodka caaryada, qalabaynta, tijaabinta, shahaadeynta, horumarinta sawirka, baakadaha, shaybaarka la saxiixay, qorsheynta qalabka, tijaabada tijaabada.
shaybaarka iibka, iyo diyaarinta wax soo saarka, BOM, Qiimaha, SOP, ERP.
Siidaynta PO, la shaqee Silsiladda sahayda ee bixinta 1aad.
Alaabta ku jirta bakhaarka oo diyaar u ah inay u rarto macmiilka.
Faahfaahin qorshaha waxqabadka sida soo socota:
Ururi VOC (codka macaamilka) si aad uhesho filashada macaamilka ka dibna codso QFD (tayada shaqada depolyment) si loo aqoonsado astaamaha muhiimka ah, lagu dhiirrigeliyo fikradda ah in la sii dejiyo, lagu dhammaystiro horumarinta fikradda iyada oo la adeegsanayo fikradda. Dhanka kale tusaalaha 3D waxay leeyihiin falanqaynta FMEA iyo DFM. Ku hel qalab EPS sax ah iyo qalab sameynta faakiyuumka qalab casri ah oo ay ku jiraan mashiinka ka soo baxa korantada siligga iyo goynta CNC.
Abuur khariidad saameyn ku leh wadada sida ku xusan heerka, qaabka caaryada ee cufnaanta la cayimay, isticmaal qalabka baaritaanka lagu cabbiray ee Cadex si aad ugu sameyso baaritaanka guriga dhexdiisa farsamo yaqaan takhasus leh. Ku caddee nooc kasta shahaado si fiican loo aqoonsan yahay. shaybaarka
Samee tilmaam shaqo iyo SOP (nidaamka hawlgalka caadiga ah) oo leh dulqaad soosaarid qeexan. Samee qorshe lagu xakameynayo Nidaamka si loo hubiyo tayo sare leh. Muuji horumarka horumarka ee guddiga scrum, si dhow ula soco horumarka adoo isticmaalaya liiska OKR, kulan istaag maalinle ah iyo jadwalka shaxda Gantt.
Ku biiri mashruuc kasta waqtigiisa qiimaha leh quaity sare.
Fikrad - 2D - Dhoobo
Gelinta farsamada & falanqaynta tartanka.
Gabagabada fikradda, qaabeynta sheyga.
Naqshad loogu talagalay qalabaynta, tijaabinta iyo kharashka.
Qeexida muuqaalka wax soo saarka
Naqshadeynta dusha sare - Nooca degdegga ah
Naqshadeynta dusha sare
Tayo sare leh nooc dhakhso leh.
Dib u eeg luqadda naqshadeynta.
Falanqaynta qulqulka 'Modex Flow'.
Tayaynta qaabeynta qalabka
Qalabaynta saxda ah
Naqshadeynta wax soo saarka, naqshadeynta falanqaynta qiimaha.
Muuqaal jadwalka qalabka iyo dhacdooyinka.
Muunad qaadista iyo tijaabinta
Goobaha imtixaanka oo si buuxda loo leeyahay.
Si fiican u faham heerarka imtixaanka.
Abuur khariidad wax ku ool ah oo xariiq xariiqda tijaabada ah.
In la adkeeyo warbixinta imtixaanka lana bixiyo falanqeyn xirfadeed.
Duulista duuliyaha iyo dib u eegista tayada.
Si buuxda loogu leeyahay deyn dhan silsiladda sahayda.
Qalabaynta saxitaanka Robot
Qorshaha SOP iyo Nidaamka Xakamaynta si loo hubiyo isku mid ahaansho tayo leh
Waqtiga la keenayo
Si dhakhso leh uga jawaab, adeegga u jahaysan Macaamiisha.